China Epidemic yekudzivirira zvinhu - Vatengesi uye Vagadziri - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Denda rekudzivirira kwezvirwere
Ipa chirwere chekudzivirira chirwere chepasi, chakaderera pane kutapukirwa kwehutachiona! Vanonyanya kupa magirovhosi, magurovhosi egurovhosi, Chipfeko chinodzivirira, girazi remagetsi, disinfectant, ruoko sanitizer, maski mashini, maski nzeve mabhendi, meltblown kotoni swabs, cotton swabs, vanoona vamiririri uye zvimwe zvinopesana nedenda! Yakagadzirwa muChina kuti ipe zvigadzirwa zvepasi rose zvekupesana nedenda kurwisa denda!
Mune mishonga yemazuva ano yekiriniki, iyo ventilator inzira inoshanda iyo inogona kugadzirisa zvakaipisisa basa rekuzvitakura kwemhepo. Iyo ventilator yakashandiswa zvakanyanya kutadza kufema kunokonzerwa nezvikonzero zvakasiyana siyana, anesthesia uye kufema manejimendi panguva yekuvhiya kukuru, kupumha rutsigiro rwekutsigira uye kukurumidza kumutsiridza Pakati pavo, ventilator inotora chinzvimbo chakakosha kwazvo mumunda wemishonga yemazuva ano. A ventilator chinhu chakakosha chekurapa chinogona kudzivirira nekurapa kufema kutadza, kuderedza matambudziko, nekuchengetedza uye kuwedzera hupenyu hwevarwere.
Izvi zvinotevera ndezveMupinduri ane hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise nani Kupindura.
Izvi zvinotevera ndezveCotton Swab neCotton Ball zvine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Cotton Swab neCotton Ball.
Izvi zvinotevera ndezveMeltblown Cloth zvine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Meltblown Cloth.
Izvi zvinotevera ndezve Mask Earband ine hukama, ndinovimba kukubatsira iwe kunzwisisa zviri nani Mask Earband.
Izvi zvinotevera ndezveSoko Sipo zvine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Hand Sipo.
Wholesale Denda rekudzivirira kwezvirwere yakagadzirwa neChina kubva kufekitari yedu. Fekitari yedu inonzi Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd inova imwe yevagadziri uye vatengesi vanobva kuChina. Kugamuchirwa kutenga Denda rekudzivirira kwezvirwere nemutengo wakaringana uyo une CE, FDA. Iwe unoda here mutengo wemutengo uye makotesheni? Kana iwe uchida, isu tinokwanisawo kukupa.